Imbali emfutshane ye-US-Israel-Palestina Relations
Imiba Umgaqo-nkqubo waseMzantsi Afrika
Nangona iPalestine ayikho igosa elisemthethweni, i-US kunye nePalestina banomlando omde wezobudlelwane bezobudlelwane bamazwe. Intloko yePalestina Authority (PA) i-Mahmoud Abbas ifake isikhalazo ekudalweni kombuso wasePalestina kwiZizwe eziManyeneyo ngoSeptemba 19, 2011-kwaye i-US isetyenziselwe ukuvota umlinganiselo-ukuba imbali yenkcubeko yangaphandle ibuye iphinde ibonakale.
Ibali le-US-Palestina ubudlelwane lide, kwaye ngokucacileyo liquka ininzi kwimbali kaSirayeli .
Lo ngowokuqala kwamanqaku amaninzi kumtshato wase-US-Palestina-Israel.
IPalestine iyindawo engamaSilamsi , okanye mhlawumbi imimandla emininzi, kunye nakwii-Jewish state ka-Israyeli eMiddle East. Izigidi zayo ezine zabantu zihlala kakhulu kwiWest Bank kwiMlambo iYordan, kunye naseGaza Strip kufuphi nomda wakwaSirayeli kunye neYiputa.
U-Israyeli uhlala kwiWest Bank kunye neGaza Strip. Yakha iindawo zokuhlala kumaYuda kwindawo nganye, kwaye yenza imfazwe emininzi yokulawula ezo ndawo.
I-United States ngokuqhelekileyo ixhasa u-Israyeli kunye nelungelo layo lokuba khona njengombuso owamkelekileyo. Ngelo xesha, i-US iye yafuna intsebenziswano evela kwiintlanga zama-Arab eMbindi-Mpuma, zombini ukufezekisa iimfuno zayo zamandla kunye nokukhusela indawo ekhuselekileyo kwaSirayeli. Iinjongo zimbini zaseMerika zibeke iPalestinians phakathi kwe-diplomatic-war-war for nearly 65 years.
Ingxabano yamaYuda kunye nePalestina yaqala ekupheleni kweXesha lama-20 amaYuda amaninzi emhlabeni wonke aqala ukunyakaza "kweZiyonist".
Ngenxa yobandlululo e-Ukraine nakwezinye iindawo zaseYurophu, bafuna indawo yabo kwiindawo ezingcwele zeBhayibhile ze-Levant phakathi kolunxwemeni lweLwandle lweMeditera kunye noMlambo iYordan. Kwakhona babefuna loo ntsimi ukuba bahlanganise iYerusalem. AmaPalestina ajonga ukuba iYerusalem iyindawo eyingcwele.
I-Great Britain, eneyona nto ibalulekileyo yamaYuda, eyayixhasa iZiyonism. Ngexesha leMfazwe Yehlabathi I, lithatha ulawulo oluninzi lwePalestina kwaye lugcinwa ukulawulwa kwemva emva kwemfazwe ngokugunyazwa kweMigudu yeZizwe ngo-1922. AmaPalestina aseArabhu avukela umbuso waseBrithani ngezihlandlo ezili-1920 neye-1930.
Kuphela emva kokuba amaNazi agxothwe ngamaYuda amaninzi ngexesha lokuQothulwa kweMfazwe yeMfazwe yehlabathi II , ukuba amazwe asekuhlaleni aqala ukuxhasa i-Jewish quest yelizwe eliqhelekileyo eMbindi-Mpuma.
Ukwahlula kunye neDaaspora
IZizwe eziManyeneyo zibhalise isicwangciso sokuhlukanisa ummandla kwimimandla yamaYuda neyasePalestina, ngenjongo yokuba elowo libe lizwe. Ngo-1947 iPalestina kunye namaArabhu avela eJordan, iYiputa, iIraq ne-Siriya yaqalisa ukulwa namaYuda.
Kwangaloo nyaka kwaqala ukuqala kwePalestina. Abangama-700,000 asePalestina baxoshwa njengemida ye-Israel.
Ngo-Meyi 14, ngo-1948, u-Israyeli wachaza ukuzimela kwakhe. IUnited States kunye namalungu amaninzi eZizwe eziManyeneyo baqaphela imeko entsha yamaYuda. AmaPalestina ayibiza umhla "al-Naqba," okanye intlekele.
Kwaqubuka imfazwe epheleleyo. U-Israyeli wabetha intlangano yamaPalestina kunye nama-Arabhu, ethatha insimu e-United Nations eyayimisele iPalestina.
U-Israyeli, nangona kunjalo, wayehlala ekhuselekile njengokuba engazange ahlale kwiWest Bank, kwiGolan Heights, okanye kwiGaza Strip. Lezo zindawo zaziza kuba yizinto zokungqubuzana neJordan, iSiriya kunye neYiputa ngokulandelanayo. Yalwa-kwaye yawa-imfazwe ngo-1967 no-1973 ukuba ihlale kuloo mihlaba. Ngowe-1967 nayo yayihlala kwiPeninula yaseSinayi eYiputa. Abaninzi basePalestina ababebalekele kwi-diaspora, okanye inzala yabo, bafumana kwakhona baphila phantsi kolawulo lwe-Israel. Nangona ixutywa ngokungekho mthethweni phantsi komthetho wamazwe ngamazwe, u-Israyeli uye wakha indawo yamaYuda kwi-West Bank.
I-United States yaxhasa u-Israyeli kuzo zonke iimfazwe. I-US iye yaqhubeka ithumela izixhobo zempi kunye nosizo lwangaphandle kumaSirayeli.
Inkxaso yaseMelika yakwaSirayeli, nangona kunjalo, yenza ubudlelwane bayo namazwe aseArabhu angamaSirayeli kunye namaPalestina angxaki.
Ukufuduka kwePalestina kunye nokungabikho kolawulo lwaseburhulumenteni yasePalestina kwaba yinto ephambili ye-anti-American American and Arabic.
I-United States iye yafuna ukwenza umgaqo-nkqubo welizwe langaphandle oncedisa ukugcina i-Israel ikhuselekile kwaye ivumela ukufikelela kwe-Amerika kwii-oyile ze-Arabhu kunye namachweba okuthumela.
I-US kunye ne-Cuba ine-History of Relations Complex
Ubudlelwane beUnited States neJapan
Izivumelwano ze-Geneva ka-1954
Umgaqo-nkqubo wangaphandle ngaphantsi kukaTomas Jefferson?
Umgaqo-nkqubo waseMzantsi Afrika emva kwe-9/11
Ubudlelwane be-United States kunye ne-United Kingdom
Umgaqo-nkqubo wangaphandle ngaphantsi kwe-John Adams
Olubomvu, oMhlophe kunye noBlue Electrolysis Khemistri yokubonisa
Yintoni i-Generic Pronoun?
Amagama angama-20 aseNtaliyane aseNtana
Ingelosi eyinhloko uHananiyeli ithatha njani uEnoki waya ezulwini?
I-Cosmos Isiqendu 5 Ukujonga iphepha lokusebenzela
Ziziphi iivili eziphambili ze-Skateboard?
Ngubani owafaka i-Odometer?
5 Iingcamango eziqhelekileyo zokuziphendukela kwemvelo
Phezulu Glenn Frey Solo Iingoma zee-80s
Ukufaka isicelo kwiSikolo soShishino
Indlela yokubhala isicwangciso seSifundo
Ukuxazulula iingxabano nabazali, i-Para-Pros, kunye nabaPhathi
Ukunikezelwa kweNtombi kaMariya
I-Wingovers ye-Fail-Fairy-Free Simahla ye-Huck-Happy Paragliding pilots